आलुको बोक्रा ताछेर खाने गर्नुहुन्छ ? बोक्रा नताछी खानुका यस्ता छन् फाईदा - जान्नुहोस् - ज्ञानविज्ञान
हरेकको भान्सामा, हरेक छाक पाक्छ आलु । आलुको अनेक परिकार बन्छ । आलुलाई जसरी पनि खान सकिन्छ । उसिनेर खाए भयो । अरु तरकारीसँग मिसाउन सकियो । अचार बनाएर खान सकियो । तरकारी, खाजा सबै रुपमा आलु उपयोगी हुन्छ । पाचन यन्त्रमा सुधार, उच्च रक्तचाप नियन्त्रण, प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउन आलु उपयोगी मानिन्छ ।
आलु स्वादिलो त हुन्छ नै, पौष्टिक पनि । आलुमा के पाइन्छ ?
– एउटा आलुमा १ सय १२ क्यालोरी उर्जा हुन्छ
– २ प्रतिशत प्रोटिन हुन्छ
– १ प्रतिशत खनिज हुन्छ
– ८० प्रतिशत पानी हुन्छ
– सय ग्राम आलुको खानयोग्य भागमा २२ दशमलव ९ प्रतिशत कार्वोहाइड्रेट हुन्छ
– ० दशमलव ६ ग्राम मिनरल्स हुन्छ
– आलु भिटामिन सिको राम्रो स्रोत हो तर, गल्ती गर्छौ
यद्यपी आलु पकाउने क्रममा हामी यस्तो गल्ती गर्छौ, जसले यसमा रहेको पौष्टिक तत्व नष्ट हुन्छ । र, आलुको पोषक तत्व त्यसको बोक्रामा बढी हुन्छ, जुन हामी ताछेर मिल्काउँछौ आलुको बोक्रा स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ ।
१. बोक्रासहित आलुको तरकारी पकाउँदा यसको स्वाद त बढ्छ नै अतिरिक्त पोषण पनि प्राप्त हुन्छ । किनभने आलुको बोक्रा पोषक तत्वले भरिपूर्ण हुन्छ ।
२. बोक्रासहित आलुको सेवनले फाइबर पनि प्राप्त हुन्छ र पाचन सम्वन्धि समस्याहरुको सामना गर्नु पर्दैन ।
३. आलुको बोक्राको सेवनले तपाईंको मेटाबोलिज्म मात्र बढाउँदैन कि शरीरमा आइरनको कमी पनि पूरा गर्छ र एनीमियाबाट पनि बचाउँछ । आलुको बोक्रा आइरनबाट भरपुर हुन्छ ।
४. स्वास्थ्यका लागि मात्र नभएर सौन्दर्यका निम्ति पनि आलुको बोक्रा लाभदायक हुन्छ । आलुको बोक्रालाई छालामा रगड्दा छालाको चाउरीपन तथा दाग धब्बाबाट बच्न सकिन्छ ।
५. आलुको बोक्राले कपाललाई पनि मजबुत बनाउन सहयोग गर्छ । गर्मीमा त्वचालाई शीतलता प्रदान गर्न पनि आलुको बोक्रा काम आउँछ ।
आलु खानुका फाइदा :
सायद तपाई हामीमध्ये थोरैलाई मात्र थाहा होला की आलु पनि औषधिको रुपमा प्रयोगमा आउन सक्छ । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो की आलु जता पनि ठिक हुने एककिसिमको तरकारी हो ।
आलुको महिमा भैरब अर्यालले पनि आफ्नो निबन्ध आलुमा गरेकै छन् । अचेल कतिपयले आलुलाई मोटोपन बढाउने तत्वको रुपमा हेरेर आलुको प्रयोग कम गर्न वा नगर्न थालेका छन् । तर आलुको केहि यस्ता गुणहरु पनि छन् जसलाई थाहा पाउनु भयो भने तपाईले आलुको प्रयोग गर्न कहिल्यै छोड्नुहुने छैन । आउनुहोस् जानौं आलुका खास विशेषताहरु स्
आलुमा भिटामिन सी, भिटामिन बि कम्प्लेक्स तथा आइरनको साथमा क्याल्सियम, म्यग्निज, फस्फोरस लगायतका तत्वाहरु हुन्छन । प्रति १०० ग्राम आलुमा १।६ प्रतिशत प्रोटिन, २२।६ प्रतिशत कर्बोहाईड्रेत, ०।१ प्रतिशत बोशो, ०।४ प्रतिशत खनिज र ९७ प्रतिशत क्यालोरी उर्जा पाइन्छ ।
आलुलाई उसिनेको पानीमा एउटा आलुलाई मिचेर कपाल धुनाले कपाल नरम र चम्किलो हुनुको साथै जरैदेखि बलियो हुन्छ । कपाल झर्ने समस्या र चाडै
फुल्ने समस्यालाई पनि यसले कम गराउँछ ।
चारओटा आलुलाई पोलेर त्यसको बोक्रा फालेर नुन खोर्सानी हालेर खाएमा ब्चतजचष्तष्क ठिक हुन्छ ।
Don't Miss it टुसायुक्त खानेकुरा खानुका फाइदै फाइदा – यसमा पाइन्छ यो भिटामिनको भण्डार
Up Next किन चाहिन्छ क्याल्सियम ? शरीरका लागि आवश्यक क्याल्सियम कसरी प्राप्त गर्ने ? जान्नुहोस्